कसरी थाहा पाउने कलेजाे सम्बन्धी राेग ? - Purbeli News
कसरी थाहा पाउने कलेजाे सम्बन्धी राेग ?
प्रकाशित मिति: सोमबार, पौष ०६, २०७७ समय: २०:१४:४७
काठमाडाैं । स्वस्थ मानिसको कलेजोको तौल १.३ देखि १.६ किलोग्राम हुन्छ । शरीरमा भएको विष वा विभिन्न रसायनलाई फिल्टर गरी पित्त उत्पादन गर्छ र दिसा र पिसाबको रुपमा बाहिर फाल्छ । कलेजोले ३०० वटा भन्दा बढी काम गर्छ । यसले रगतमा चिनीको मात्रा पनि सन्तुलनमा राख्छ । यसको अर्को महत्त्वपूर्ण कार्य रगत निर्माण गर्नु पनि हो ।
कलेजोमा समस्या आयो भने शरीरका छालाहरू पहेँलो हुँदै जान्छन् । आँखामा पनि पहेँलोपन बढ्दै जान्छ । पिसाबमा पनि पहेँलोपना बढ्दै गयो भने कलेजोको समस्या हुनसक्छ । कलेजोको समस्या बढ्दै गयो भने रगत बान्ता हुन थाल्छ । बान्तामा रगतको छिर्का देखियो भने कलेजोको समस्या हुनसक्छ ।
कलेजो अस्वस्थ भयो भने हातगोडा सुन्निन थाल्छ । पेटभन्दा तल पनि सुन्निएको महसुस हुन्छ । यदि हातगोडा धेरै नै सुन्निन थाल्यो भने कलेजोको अवस्था खतरनाक स्थितीमा पुगेको भन्ने बुझ्नुपर्छ । परिश्रम गर्नुपर्ने काम नै नगरी बारम्बार थकान र कमजोरी महसुस हुन्छ । त्यस्तै निन्द्रा पनि कम लाग्न थाल्छ भने कलेजोको समस्या हुनसक्छ । त्यसैले यस्ता लक्षणहरु देखिए भने तुरुन्त डाक्टरको सल्लाह लिनुपर्छ ।